အဘယျသို့ဥပုသ်ဖြစ်ပါတယ် & အဘယ်ကြောင့် Do ကက်သလစ် Fast? – 2ငါးကို
မဿဲအတွက်ကျောက်ကိုအဘယ်သူသည် Is 16:18?
အဘယ်ကြောင့်ယဇ်ပုရောဟိတ် Celibate Are?
ယရှေုသညျ Said, "အဘယ်သူမျှမက Man ခမညျးတျော Call"
အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးများယဇ်ပုရောဟိတ် Be မဟုတ်နိုင်သ?
အ Mass တစ်ခုအစောပိုင်းသက်သေခံ
ကျနော်တို့ကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်နေရမည်? Mass မှာ.
အဘယျသို့ဥပုသ်ဖြစ်ပါတယ် & အဘယ်ကြောင့် Do ကက်သလစ် Fast?
50 - 99 အေဒီ
100 - 150 အေဒီ
151 - 299 အေဒီ
300 - 999 အေဒီ
1000 - 1499 အေဒီ
1500 - ပစ္စုပ္ပန်
ငရဲကလေး, အပြစ်လွှတ်ခြင်း, အကျိုးဆက်များ
ငါ့ကို Save ကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြောဆိုခြင်းလိမ့်မည်?
ch 1 မဿဲ
ch2မဿဲ
ch3မဿဲ
ch4မဿဲ
ch5မဿဲ
ch6မဿဲ
ch7မဿဲ
ch 8 မဿဲ
ch9မဿဲ
ch 10 မဿဲ
ch 11 မဿဲ
ch 12 မဿဲ
ch 13 မဿဲ
ch 14 မဿဲ
ch 15 မဿဲ
ch 16 မဿဲ
ch 17 မဿဲ
ch 18 မဿဲ
ch 19 မဿဲ
ch 20 မဿဲ
ch 21 မဿဲ
ch 22 မဿဲ
ch 23 မဿဲ
ch 24 မဿဲ
ch 25 မဿဲ
ch 26 မဿဲ
ch 27 မဿဲ
ch 28 မဿဲ
ch 1 မာကု
ch2မာကု
ch3မာကု
ch4မာကု
ch5မာကု
ch6မာကု
ch7မာကု
ch 8 မာကု
ch9မာကု
ch 10 မာကု
ch 11 မာကု
ch 12 မာကု
ch 13 မာကု
ch 14 မာကု
ch 15 မာကု
ch 16 မာကု
ch 1 လုကာ
ch2လုကာ
ch3လုကာ
ch4လုကာ
ch5လုကာ
ch6လုကာ
ch7လုကာ
ch 8 လုကာ
ch9လုကာ
ch 10 လုကာ
ch 11 လုကာ
ch 12 လုကာ
ch 13 လုကာ
ch 14 လုကာ
ch 15 လုကာ
ch 16 လုကာ
ch 17 လုကာ
ch 18 လုကာ
ch 19 လုကာ
ch 20 လုကာ
ch 21 လုကာ
ch 22 လုကာ
ch 23 လုကာ
ch 24 လုကာ
ch 1 ယောဟန်သည်
ch2ယောဟန်သည်
ch3ယောဟန်သည်
ch4ယောဟန်သည်
ch5ယောဟန်သည်
ch6ယောဟန်သည်
ch7ယောဟန်သည်
ch 8 ယောဟန်သည်
ch9ယောဟန်သည်
ch 10 ယောဟန်သည်
ch 11 ယောဟန်သည်
ch 12 ယောဟန်သည်
ch 13 ယောဟန်သည်
ch 14 ယောဟန်သည်
ch 15 ယောဟန်သည်
ch 16 ယောဟန်သည်
ch 17 ယောဟန်သည်
ch 18 ယောဟန်သည်
ch 19 ယောဟန်သည်
ch 20 ယောဟန်သည်
ch 21 ယောဟန်သည်
ch 1 တမန်တော်ဝတ္ထု
ch2တမန်တော်ဝတ္ထု
ch3တမန်တော်ဝတ္ထု
ch4တမန်တော်ဝတ္ထု
ch5တမန်တော်ဝတ္ထု
ch6တမန်တော်ဝတ္ထု
ch7တမန်တော်ဝတ္ထု
ch 8 တမန်တော်ဝတ္ထု
ch9တမန်တော်ဝတ္ထု
ch 10 တမန်တော်ဝတ္ထု
ch 11 တမန်တော်ဝတ္ထု
ကောရိန္တုပြည်သားမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
ကောရိန္တုပြည်သားမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
အ Phillipians မှပေါလု၏ပေးစာ
သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
တိမောသေမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
တိမောသေမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
1ပေတရု၏ st ပေးစာ
1ယောဟန်၏ st ပေးစာ
1ရှမွေလသည်၏ st စာအုပ်
1ရာဇဝငျ၏ st စာအုပ်
1ရာဇဝငျခြု၏ st စာအုပ်
1မက္ကဘီး၏ st စာအုပ်
Daily သတင်းစာထားတဲ့အီးမေးလ်အဘို့အ Signup
- စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော concept
- အဆိုပါ Papacy
- မဿဲအတွက်ကျောက်ကိုအဘယ်သူသည် Is 16:18?
- အဘယ်ကြောင့်ယဇ်ပုရောဟိတ် Celibate Are?
- အားလုံးခရစ်ယာန်တွေကိုယဇ်ပုရောဟိတ် Are?
- ယရှေုသညျ Said, "အဘယ်သူမျှမက Man ခမညျးတျော Call"
- အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးများယဇ်ပုရောဟိတ် Be မဟုတ်နိုင်သ?
- အ Mass တစ်ခုအစောပိုင်းသက်သေခံ
- ကျနော်တို့ကိုဘယ်လိုကိုးကွယ်နေရမည်? Mass မှာ.
- ရပ်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ရုံကက်သလစ်ကွာရှင်း Is?
- အဘယျသို့ဥပုသ်ဖြစ်ပါတယ် & အဘယ်ကြောင့် Do ကက်သလစ် Fast?
- 50 - 99 အေဒီ
- 100 - 150 အေဒီ
- 151 - 299 အေဒီ
- 300 - 999 အေဒီ
- 1000 - 1499 အေဒီ
- 1500 - ပစ္စုပ္ပန်
- ဘုရားသခငျသညျကောငျးဆိုရငျ, အဘယ်ကြောင့်ဆငျးရဲဒုက်ခရှိ?
- ငရဲကလေး, အပြစ်လွှတ်ခြင်း, အကျိုးဆက်များ
- ငါ့ကို Save ကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြောဆိုခြင်းလိမ့်မည်?
- ch 1 မဿဲ
- ch2မဿဲ
- ch3မဿဲ
- ch4မဿဲ
- ch5မဿဲ
- ch6မဿဲ
- ch7မဿဲ
- ch 8 မဿဲ
- ch9မဿဲ
- ch 10 မဿဲ
- ch 11 မဿဲ
- ch 12 မဿဲ
- ch 13 မဿဲ
- ch 14 မဿဲ
- ch 15 မဿဲ
- ch 16 မဿဲ
- ch 17 မဿဲ
- ch 18 မဿဲ
- ch 19 မဿဲ
- ch 20 မဿဲ
- ch 21 မဿဲ
- ch 22 မဿဲ
- ch 23 မဿဲ
- ch 24 မဿဲ
- ch 25 မဿဲ
- ch 26 မဿဲ
- ch 27 မဿဲ
- ch 28 မဿဲ
- ch 1 မာကု
- ch2မာကု
- ch3မာကု
- ch4မာကု
- ch5မာကု
- ch6မာကု
- ch7မာကု
- ch 8 မာကု
- ch9မာကု
- ch 10 မာကု
- ch 11 မာကု
- ch 12 မာကု
- ch 13 မာကု
- ch 14 မာကု
- ch 15 မာကု
- ch 16 မာကု
- ch 1 လုကာ
- ch2လုကာ
- ch3လုကာ
- ch4လုကာ
- ch5လုကာ
- ch6လုကာ
- ch7လုကာ
- ch 8 လုကာ
- ch9လုကာ
- ch 10 လုကာ
- ch 11 လုကာ
- ch 12 လုကာ
- ch 13 လုကာ
- ch 14 လုကာ
- ch 15 လုကာ
- ch 16 လုကာ
- ch 17 လုကာ
- ch 18 လုကာ
- ch 19 လုကာ
- ch 20 လုကာ
- ch 21 လုကာ
- ch 22 လုကာ
- ch 23 လုကာ
- ch 24 လုကာ
- ch 1 ယောဟန်သည်
- ch2ယောဟန်သည်
- ch3ယောဟန်သည်
- ch4ယောဟန်သည်
- ch5ယောဟန်သည်
- ch6ယောဟန်သည်
- ch7ယောဟန်သည်
- ch 8 ယောဟန်သည်
- ch9ယောဟန်သည်
- ch 10 ယောဟန်သည်
- ch 11 ယောဟန်သည်
- ch 12 ယောဟန်သည်
- ch 13 ယောဟန်သည်
- ch 14 ယောဟန်သည်
- ch 15 ယောဟန်သည်
- ch 16 ယောဟန်သည်
- ch 17 ယောဟန်သည်
- ch 18 ယောဟန်သည်
- ch 19 ယောဟန်သည်
- ch 20 ယောဟန်သည်
- ch 21 ယောဟန်သည်
- ch 1 တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch2တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch3တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch4တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch5တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch6တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch7တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch 8 တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch9တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch 10 တမန်တော်ဝတ္ထု
- ch 11 တမန်တော်ဝတ္ထု
- ကောရိန္တုပြည်သားမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
- ကောရိန္တုပြည်သားမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
- အ Phillipians မှပေါလု၏ပေးစာ
- သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
- သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
- တိမောသေမှပေါလုရဲ့ 1st ပေးစာ
- တိမောသေမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
- 1ပေတရု၏ st ပေးစာ
- 1ယောဟန်၏ st ပေးစာ
- 1ရှမွေလသည်၏ st စာအုပ်
- 1ရာဇဝငျ၏ st စာအုပ်
- 1ရာဇဝငျခြု၏ st စာအုပ်
- 1မက္ကဘီး၏ st စာအုပ်
- Daily သတင်းစာထားတဲ့အီးမေးလ်အဘို့အ Signup
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / ကိစ္စရပ်များကို / အဘယျသို့ဥပုသ်ဖြစ်ပါတယ် & အဘယ်ကြောင့် Do ကက်သလစ် Fast?
ဥပုသ်အီစတာ precedes ကြောင်းဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာနောက်ဆုံးအရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး, ဒါပေမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ရကျကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြသည်မဟုတ်, အကြောင်းကိုဒီတော့ဥပုသ်စတင် 46 အီစတာမတိုင်မီရက်ပေါင်း. ရောမကက်သလစ်များအတွက်, Ash ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစတင်ထုတ်ချေးမှာအဆုံးသတ် 3:00 ကောင်းမွန်သောသောကြာနေ့ညနေ–နှစ်ရက်အီစတာတနင်္ဂနွေမတိုင်မီ. ဒါဟာသြသဒေါက်ကက်သလစ်များအတွက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောင်.
အနောက်ကမ္ဘာ၏တာတစ်လျှောက်လုံး, ဒါဟာအဖြစ်လူသိများသည် ဥပုသ်, အဘို့အရာလက်တင် "ဟုအဆိုပါအရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး။ " အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့, သို့သော်, အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် ဥပုသ် မှုအတွက်အင်ျဂလိစကားလုံးပြီးနောက် နွေဦး.
ဒါကြောင့်, ပြာကဘာလဲအကြောင်းကို Are?
ကျမ်းစာထဲမှာ, တဦးတည်းရဲ့ခေါငျးပျေါမှာပြာကိုချပြီးစိတ်မသာညည်းတွားခြင်းနှင့်နောင်တတရားနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ (ယောဘသည်ကိုတွေ့မြင် 42:6, et al ။).
ကမ်ဘာဦးကအာဒံကိုဘုရားသခငျရဲ့စကားပြန်ညွှန်ပြ 3:19, "သင်ဖုန်မှုန့်များမှာ, သငျတို့သပြန်လာကြလိမ့်မည်မွမှေုနျ့,"ပြာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သေဆုံးမှုကိုတစ်ဦးအစွမ်းထက်သတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့အပြစ်များမှလွှဲရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါပေါ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖူးပေါ်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏လက္ခဏာသက်သေကျနော်တို့ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏ပိုင်ကြောင်းသင်္ကေတ, ထိုသို့ကျွန်တော်သူ့ထမြောက်ခြင်းမှာ share လိမ့်မည်ဟုငါတို့မြော်လင့်ဖြစ်ပါသည် (ပေါလုရဲ့ကြည့်ရှု ရောမအက္ခရာ 8:11).
လက်ဝါးကပ်တိုင်၏လက္ခဏာသက်သေဘို့အကျမ်းစာထုံးတမ်းစဉ်လာဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် 7:3, အရာဟာသူတို့ရဲ့နဖူးပေါ်မှာအကာအကွယ်အမှတ်အသားကိုလက်ခံရရှိသစ္စာရှိသော၏ပြောတတ်. အစောပိုင်းခရစ်ယာန်သမိုင်းရေးသားခဲ့သောဆရာအဖြစ်ကောင်းစွာလက်ဝါးကပ်တိုင်၏လက္ခဏာသက်သေကိုရည်ညွှန်း. Tertullian, လှည့်ပတ် 200 A.D., wrote, "နေ့စဉ်ဘဝ၌ရှိသမျှသောသာမန်လုပ်ရပ်များခုနှစ်တွင်, ကြှနျုပျတို့သညျ "နဖူးပေါ်မှာနိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာကောက် (သရဖူ 3).
ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း၏ 40 ရက်ကြာကာလ၏ထုံးစံယေရှု၏စံနမူနာအောက်ပါအတိုင်း, သူ့မွကွေီးဓမ်မများအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ဤတော၌အစာရှောင်ဆုတောင်း 40y ရက်ပေါင်းသုံးစွဲခဲ့သူ, မဿဲတွေ့မြင် 4:2.
Ash ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့သောကြာနေ့တိုင်းတွင်ဥပုသ်ကာလအတွင်း, သစ္စာရှိသောအစာရှောငျခေါ်ကြသည်. သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ကောင်းသောကျန်းမာရေးနှင့်များ၏အသက်အရွယ်အကြားနေသောကက်သလစ် 18 နှင့် 59 ကိုယ့်တဦးတည်းအပြည့်အဝန့်ညက်နှစ်ဦးသေးငယ်တဲ့အစားအစာများကိုစားရန်လိုအပ်သည် (အတူတူဖြစ်သောအပြည့်အဝန့်ညက်တူညီမှာမဟုတ်ဘူး).
ရေနှင့်ဆေးဝါးများ၏စားသုံးမှု, ဒါပေါ့, အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းအတွက်မပါဝင်ပါ.
အစာရှောင်ခြင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့သို့လူ့ဇာတိကိုရောက်စေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဝိညာဏစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်. စိန့်ပေါလ်သည်မိမိ၌ရေးသားထားသည်အဖြစ် ကောရိန်သုပထမပေးစာ, "ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ် pommel နှင့်နှိမ့်ချ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အရည်အချင်းပျက်ယွင်းရပါမည်အခြားသူများကိုဟောပြောပြီးနောက်မည်။ "
ဘုရားသခငျသညျကိုခစျြ၏ထွက်ဖျော်ဖြေသောအခါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေတဲ့သဘာဝလွန်တန်ခိုးအားရှိပါတယ်. တွင် မဿဲ 6:4 နှင့် 18, ယရှေုသညျဆွမ်းအစာရှောငျမြားနှငျ့ပေးရသူ့နောက်လိုက်အကြံပြု, မဟုတ်ယောက်ျား၏ဘုရားသခငျ၏ခွင့်ပြုချက်အတွက် "မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်နှငျ့သငျဆုချတော်မူလိမ့်မည်။ " သူတို့ကဆိုးသောဝိညာဉျတျောကိုနှင်ထုတ်နိုင်ခြင်းခဲ့ဘာဖြစ်လို့တပည့်ကိုယ်တော်ကိုမေးတဲ့အခါ, သူ replied, "ဒီမျိုးကိုဘာမှပေမယ်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်နှင်ထုတ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး" (မာကု 9:29). ကျောနလေိအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောကောငျးကငျတမနျ တမန်တော်၏တမန်တော်, 10:4 သူ့ကိုမှထုတ်ဖော်ပြသ, "သင်၏ပဌနာနှင့်သင်၏ဆွမ်းဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အောက်မေ့စရာအဖြစ်တက်ပြီပြီ။ "
Ash ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့သောကြာနေ့တိုင်းတွင်ဥပုသ်ကာလအတွင်း, ကက်သလစ် 14 အသက်အရွယ်နှင့်အထက်နှစ်ပေါင်းများစွာအသားစားသုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ဟုခေါ်ကြသည်. Canon ၏ပညတ္တိကျမ်းအလိုအရ, တကယ်တော့, ကက်သလစ်အမဲသားကိုရှောင်ဟုခေါ်ကြသည် (သို့မဟုတ် penance တစ်ခုညီမျှလုပ်ရပ်လုပ်ဆောင်) အပေါ် တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးတိုင်းသောကြာနေ့.1
သစ္စာရှိသောအပေါ်သို့ binding ဥပဒေများကိုဖြစ်စေခြင်းငှါဘုရားကျောင်းရဲ့အခွင့်အာဏာကိုခရစ်တော်အားကိုယ်တော်တိုင်မှလာ, အဘယ်သူသည်မဿဲအတွက်တမန်တော်တို့အားဆို၏ 18:18, "ဘာပဲသင်မွကွေီးပျေါမှာခညျြနှောငျကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူခညျြနှောငျခံရကြလိမ့်မည်; သငျသညျမွကွေီးပျေါမှာချွတ်သမျှကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူလွတ်ရလိမ့်မည်။ " (သူကပတေရုသကဆိုပါတယ်, များလွန်း။)
အသင်းတော်၌ရှိသမျှသောဥပဒေများနှင့်အမျှ, သောကြာနေ့မှာအသားကနေ abstinence ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်ထူထောင်မခံခဲ့ရ, ဒါပေမယ့်ပိုမိုနီးကပ်စွာယေရှုအားကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့. ဒါဟာရက်သတ္တပတ်၏ဤနေ့သညျယရှေုငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံရခြင်းနှင့်အသေခံသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေး.
မိမိအခုနှစ် တိမောသေဖို့ပထမဦးစွာပေးစာ 4:3, စိန့်ပေါလ်သူတို့အားရှုတ်ချ "လက်ထပ်ထိမ်းမြားမြစ်တားခြင်းနှင့်အစားအစာများကနေ abstinence အတွက်ပညတ်တဲ့သူ။ " တချို့အသားကနေအိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းနှင့် abstinence ၏ကက်သလစ်အလေ့အထများကိုအပြစ် တင်. ဤကျမ်းပိုဒ်အလွဲသုံးစားပါပြီ.
ဤကျမ်းပိုဒ်များတွင်, သော်လည်း, ပေါလုကနောစရည်ညွှန်းခဲ့သည်, သူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးဒုစရိုက်ကိုယုံကြည်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်မင်္ဂလာနှင့်အစားအစာပေါ်ငုံ့ကြည့်. ကက်သလစ်, သို့သော်ငြားလည်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးမကောင်းသောအကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး. အခြို့သောကက်သလစ်အလေ့အကျင့်အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းကိုပြု, ဒါပေမယ့်အားလုံးကက်သလစ်အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းကျင့်သုံးပါလျှင်, အချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့အဘယ်သူမျှမကက်သလစ်တှေရှိခဲ့တယျမယ်လို့–အဆိုပါ Shakers နဲ့တူ.
ဆန့်ကျင်ရန်, ပေါလုသည်အတူတူပင်စာတစ်စောင်၏နောက်ကျမ်းပိုဒ်၌ရေးသားထားသည်သကဲ့သို့ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တွေကဲ့သို့သော Self-ထိန်းချုပ်မှုကိုတွေ့မြင် (4:4). သို့သျောလညျးကျွန်တော်တို့ဟာပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ကိုချစ်နှင့်ဗွေဆော်အပေါင်းတို့ထက်သောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းသရုပ်ပြအချို့သောအချိန်များတွင်နှင့်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့ကိုရှောင်.
အစာရှောင်ခြင်း, abstinence ကျနော်တို့ဥပုသ်ကာလအတွင်းပူဇော်အခြားသေးငယ်သောယဇ်ပူဇော်ပွဲကို, ပြစ်ဒဏ်ပေမယ့်ကိုကမ္ဘာမှလွှဲနှင့်ပိုပြီးအပြည့်အဝသညျဘုရားသခငျကိုဦးတည်ရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုမဟုတ်–ချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအတွက်ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးတည်ကမ်းလှမ်းရန်, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အား.
Canon ၏ဥပဒေကျင့်ထုံးဥပဒေ 1250: "အားလုံးတစ်နှစ်မှတဆင့်သောကြာနေ့နှင့်ကာလဥပုသ်တစ်ခုလုံးကိုဘုရားကျောင်းတစ်လျှောက်လုံး penitential ရက်ပေါင်းနှင့်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ " ↩
အီးမေးလ် Mass ဖတျရှုပွီး Get
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့ Daily သတင်းစာ Mass ဖတျရှုပွီးလက်ခံရရှိရန်မှတ်ပုံတင်မည်. သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူလုံခြုံစွာ. ကျနော်တို့အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မသုံးပါလိမ့်မယ်, မဟုတ်ကျွန်တော်ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ကသာဝငျကမျြးနှင့်စာဖတ်ခြင်းစလှေတျမညျ(s ကို) နေ့ရက်တိုင်း. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!
အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန် Arabicအဘိဓါန် Afrikaansဘီလာရုဘူဂေးရီးယားကာတာလတရုတ်-CroatianခကျြခကျြဒိနျးမတျဒတျချြEstonian အဘိဓါန်ဖာစီဖင်လန်ပြင်သစ် (ပြင်သစ်)ပြင်သစ် (ကနေဒါ)ဂျာမန်ဂရိဟီဘရူးဟိန်ဟနျဂရေီလန်အင်ဒိုနီးရှားအိုငျးရစျအီတလီဂျပန်ခမာကိုရီးယားအံအာနီယံမောလ်မလေး-Macedonianနျောအရောင်တင်ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး)ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂီ)အဘိဓါန် Romanianရုရှားဆားဗီးစလိုဗကျစလိုဗေးနီးစပိန် (မက္ကစီကို)စပိန် (စပိန်)ဆွာဟီလီဆွီဒင်တမီးထိုင်းတူရကီယူကရိန်းဗီယက်နမ်လူမျိုး
အထက်သင့်ဘာသာစကား select လုပ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး. ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဖတ်ကြားဘာသာပြန်ဆိုတဲ့ feature ကိုထည့်သွင်းဖို့စီစဉ် - အလိုအလျောက် Google ကဘာသာပြန်စာပေမှတဆင့် - သင့်ရွေးချယ်မှုကို၏ဘာသာစကားကိုမှ.
မကြာမီက Daily သတင်းစာ Mass ဖတျရှုပွီး
စက်တင်ဘာလ 18, 2019
စက်တင်ဘာလ 17, 2019
စက်တင်ဘာလ 16, 2019
စက်တင်ဘာလ 15, 2019
စက်တင်ဘာလ 14, 2019
မူပိုင်ခွင့် 2011 - 2017 © 2fish.co